Soomaaliland oo Xirtay Dad ka Ganacsanayay Diinka | Radio Danan (DBN) 94 FM
Home / WARARKA / Soomaaliland oo Xirtay Dad ka Ganacsanayay Diinka
Soomaaliland oo Xirtay Dad ka Ganacsanayay Diinka
Posted by: DBN in WARARKA February 13, 2018	Comments Off on Soomaaliland oo Xirtay Dad ka Ganacsanayay Diinka
Wararka inaga soo gaaraya Magaalada Hargeysa ee Xarunta Maamulka Soomaaliland,ayaa waxa ay shegayaan in Laamaha Amaanka Soomaaliland ay Xabsiga ay dhigeen ku dhawaad 9 qof oo lagu edeeyay in ay ka Ganacsayeen Xawayaanka loo qayaan Diinka.
Diinka ayaa la heleen Cago uu kaga baxsado Dadka ayaa dhawanahaan waxaa lagu hayay U gaarsi ba’an kadib markii la sheegay in laga helo Dahab jirkiisa sida ay shegeen dad ka Ganacsada Xayawaankaasi.
Dhanka kale Wasiirka Wasaarada Degaanka Soomaaliland Shurki Xaaji Ismaaciil ayaa warbaahinta u sheegtay in ay soo badbaadiyeen ilaa iyo 6 Diin o sida ay tilmaamtay la donayay in laga Ganacsado,waxa ayna hadalkeeda intaas ku sii dartay in hadda lagu Xananeenayo Gudaha Wasaarada Degaanka ee Soomaaliland.
Si kastaba ha ahaate Soomaliland ayaa horay u Mamnuucday in laga ganacsado Xayawaanka Diinka,iyo u Gaarsigiisaba,waxaana Xusid mudan in Xayawaanka Diinka uu ka mid yahay Xayawaanada sii dabar go,aayo Aduunka gaar ahaan Dhulka Soomaaliyeed.
Previous: Al-shabaab oo Malaayiin doollar ka hela Gargaar loogu tala galay Soomaaliya
Next: Dhageyso:Al-Shabaab oo la sheegay in Khasaaro Xoogan la gaarsiyay lagana qabsaday Hub